DEG-DEG: Halyeygii Manchester United Ee Ryan Giggs Oo Maxkamad Xukun Ku Ridday Kaddib Xaaskiiga Iyo Gabadh Kale Oo Uu Dhaawacyo U Geystay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Halyeygii Manchester United Ee Ryan Giggs Oo Maxkamad Xukun Ku Ridday Kaddib Xaaskiiga Iyo Gabadh Kale Oo Uu Dhaawacyo U Geystay
DEG-DEG: Halyeygii Manchester United Ee Ryan Giggs Oo Maxkamad Xukun Ku Ridday Kaddib Xaaskiiga Iyo Gabadh Kale Oo Uu Dhaawacyo U Geystay
April 23, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Tababaraha xulka qaranka Wales, ahna halyeygii hore ee Manchester United ee Ryan Giggs ayaa lagu riday xukun maxkamadeed kaddib markii lagu helay in uu dhaawacyo u geystay laba haween ah oo ay ku jirto xaaskiisa.
Ryan Giggs ayaa lagu eedeeyey in uu dhaawacyo muuqda oo jidhka ah u geystay xaaskiisa oo ku jirta da’da 30-meeyaha xilli ay wada joogeen gurigooda ku yaalla Worsley bishii November, iyo gabadh kale oo 20 jir ah oo iyadana uu xidhiidh la sameeyey oo uu dhaawacyo ugu geystay aagga Salford.
Ciidamo boolis ah ayaa soo galay guriga Giggs bishii November markaas oo ay xaaskiisu u yeedhatay iyadoo dhaawacyo qabta, waxaana Giggs lagu eedeeyey in uu gacan u qaaday. Warbaahinta ayaa soo bandhigtay wajiga xaaskiisa oo dhaawacyo qaba.
Kiiska labaad ee gabadha 20 jirka ah ee degganayd Salford ayaa waxa uu isaguna dhacay sannadkii 2017.
Giggs oo lagu eedeeyey in uu gabadh kale saaxiib la ahaa iyadoo xaaskiisu joogta, ayaa waqtiga uu gacanta u gaadhay haweenaydiisa waxay soo ogaatay in uu saaxiibad leeyahay, hadalkii iyo murankii ka dhashay ayaana sababay in uu gacanta u qaado oo uu dhaawacyo gaadhsiiyo xaaskiisa.
Halyeyga United ee mashaqada ku dhex-jira ayaa waqtigaas laga joojiyey xulka qaranka Wales ee uu tababaraha u ahaa, waxaana si ku-meelgaadh ah loogu dhiibay ku-xigeenkiisii Robert Page.
Kiiska dhacay sannadkii 2017 ee gabadha 20 jirka ah ayay maxkamaddu dhegaysigiisa rasmiga ah bilaabi doontaa April 28, waxaana uu Ryan Giggs ballan-qaaday in uu caddayn doono in aanu dembi lahayn.
Ryan Giggs oo xulka qarankiisa u ciyaaray 64 kulan muddadii u dhaxaysay 1991 illaa 2007 ayaa waxa uu qarankiisa ku hoggaamiyey in ay usoo baxaan Euro 2020 oo la ciyaari doono bisha June.